War Rasmi ah: Luis Diaz oo u saxiixi doona Liverpool heshiis shan sano ah | dalkaan.com-Wararka ugu danbeeyay ee soomaaliya
Home Ciyaaraha War Rasmi ah: Luis Diaz oo u saxiixi doona Liverpool heshiis shan...
War Rasmi ah: Luis Diaz oo u saxiixi doona Liverpool heshiis shan sano ah
Liverpool ayaa lagu soo waramayaa inay qarka u saaran tahay inay dhameystirto saxiixa Luis Diaz oo ka yimid Porto .
Ciyaaryahanka heerka caalami ee dalka Colombia ayaa lagu eedeeyay inuu u soo muuqday bartilmaameedka ugu horreeya ee suuqa kala iibsiga ee Tottenham Hotspur usbuucii hore, kaliya Liverpool ayaa si dhaqso ah ugu dhaqaaqday xidigan.
Reds ayaa hadda la sheegay in ay ku sii dhawaanayso saxiixa Diaz, sida uu sheegay saxafiga reer Talyaani ee Fabrizio Romano , xiddiga reer South America ayaa qalinka ku duugi doona heshiis shan sano ah oo uu kula sii joogi doono kooxda Merseyside.
Romano ayaa sheegay in 25-sano jirkaan uu mar hore heshiis shaqsi ah la gaaray, iyadoo labada kooxood ay ka shaqeynayaan ‘faahfaahinta ugu dambeysa’ ka hor inta aan lagu dhawaaqin.
Diaz ayaa qaab ciyaareed cajiib ah ku soo bandhigay kooxda Porto intii lagu jiray xilli ciyaareedkii 2021-22, isagoo dhaliyay 16 gool, waxaana uu diiwangeliyay lix caawin 28 kulan oo uu saftay tartamada oo dhan.
Weeraryahanka garabka bidix ayaa labo jeer ka horyimid Liverpool wareega group-yada Champions League xilli ciyaareedkan, halka uu labo gool ka dhaliyay AC Milan tartanka xilli ciyaareedkan.
Kooxda Premier League ka dhisan ayaa lagu Xamanayaa inay saxiixa Diaz ku bixin doonto adduun dhan 50 milyan ginni, iyadoo tijaabada caafimaadka uu ka dhici doono Argentina dhammaadka usbuucan.
Manchester City oo dalab ka gudbinaysa Marc Cucurella iyadoo Brighton ay...
Manchester City ayaa dalabkeeda furitaanka ka gudbinaysa daafaca garabka ee Brighton Marc Cucurella. Da’yarkii hore ee Barcelona ayaa u furan inuu ku biiro kooxda...
Xog: Loolan adag oo ka jira doorashada HOP123 iyo musharaxa loo...
Daafaca West Ham Zouma oo lagu soo oogay Saddex dambiyo oo...
Xog: Saciid Deni oo niyad jab weyn kala kulmay xildhibaanada laga...
War Deg Deg Ah: Manchester United oo ku wargelisay Barcelona Xiisaha...